Writing Week (5) - Smart OET Training Centre
Week5– Day 1 Plan
Day 1 Lessons ➡ Day 1 တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Relative Clauses Relative Clauses Exercise Sample Letters (8) Letter Writing Exercise (9) ➡ Day 1 တွင် Relative Clauses များအကြောင်းကို လေ့လာရပါမည် ➡ Letter အသစ် ၁စောင်ကိုလဲ ထပ်လေ့ကျင့်ရပါမည်
Sample Letter (8)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (8) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Explanation Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (8) Explanation 🔸Duration = 15 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
➡ Letter ရေးရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော Relative Clauses များကို လေ့လာရပါမည် Relative Clauses 🔸Duration = 20 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ်
Relative Clauses Exercise (1) ➡ ပေးထားသော ဝါကျများတွင် မှန်ကန်သော Relative clauses များကို ရွေးထဲ့ပါ ➡ Phone ဆိုလျှင် လက်နှင့် ၊ Computer တွင် Mouse နှင့် မှန်သော စာလုံးကို နှိပ်ပြီး ကွက်လပ်ထဲသို့ ရွှေ့နိုင်ပါသည် ➡ ရွေးပြီးလျှင် Check နှင့် Show solution ခလုတ်များကို နှိပ်၍ အဖြေတိုက်နိုင်ပါသည် Relative Clauses Exercise (2) ➡ ပေးထားသော ဝါကျများတွင် မှန်ကန်သော Relative clauses များကို ရွေးထဲ့ပါ ➡ Phone ဆိုလျှင် လက်နှင့် ၊ Computer တွင် ... Read more Relative Clauses Exercise
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင် Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် တင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် 🔸 လက်ရေးနှင့် ရေးထားသော Letter များကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ပါသည် 🔸 သို့သော် လက်ရေးပီသမှုတော့ ရှိဖို့လိုပါသည်။ လက်ရေးနှင့်ရေးလျှင် တစ်ကြောင်းခြားလောက်ရေး ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည် 🔸 ဓါတ်ပုံရိုက်လျှင် ... Read more Letter (9)
Week5– Day 1 Summary
Congratulation! You have completed Day 1 Lessons. Summary of Day 1 Lessons ➡ Day 1 တွင်လေ့လာခဲ့သော သင်ခန်းစာများမှာ Relative Clauses Relative Clauses Exercise Sample Letters (8) Letter Writing Exercise (9) ➡ Relative Clauses များအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ပြီးသောကြောင့် Letter ရေးရာတွင် ထဲ့အသုံးပြုသင့်ပါသည် ➡ သင်ခန်းစာများကို ကြေညက်အောင် အချိန်မရွေး ထပ်ခါလေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်
Week5– Day2Plan
Day2Lessons ➡ Day2တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Useful Verbs Sample Letters (9) Letter Writing Exercise (10) ➡ Day 1 တွင် Useful Verbs များအကြောင်းကို လေ့လာရပါမည် ➡ Letter အသစ် ၁စောင်ကိုလဲ ထပ်လေ့ကျင့်ရပါမည်
Sample Letter (9)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (9) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Explanation Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (9) Explanation 🔸Duration = 10 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
➡ Letter ရေးရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော Useful Verbs များကို လေ့လာရပါမည် Useful Verbs 🔸Duration = 16 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ်
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင် Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် တင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် 🔸 လက်ရေးနှင့် ရေးထားသော Letter များကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ပါသည် 🔸 သို့သော် လက်ရေးပီသမှုတော့ ရှိဖို့လိုပါသည်။ လက်ရေးနှင့်ရေးလျှင် တစ်ကြောင်းခြားလောက်ရေး ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည် 🔸 ဓါတ်ပုံရိုက်လျှင် စာရွက်တစ်ရွက်လုံးကို ... Read more Letter (10)
Week5– Day2Summary
Congratulation! You have completed Day2Lessons. Summary of Day2Lessons ➡ Day2တွင်လေ့လာခဲ့သော သင်ခန်းစာများမှာ Useful Verbs Sample Letters (9) Letter Writing Exercise (10) ➡ Useful Verbs များအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ပြီးသောကြောင့် Letter ရေးရာတွင် ထဲ့အသုံးပြုသင့်ပါသည် ➡ သင်ခန်းစာများကို ကြေညက်အောင် အချိန်မရွေး ထပ်ခါလေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်
Week5– Day3Plan
Day3Lessons ➡ Day3တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Discharge Letter Sample Letters (10) Letter Writing Exercise (11) ➡ Day3တွင် Discharge Letter ရေးနည်းအကြောင်းကို လေ့လာရပါမည် ➡ Letter အသစ် ၁စောင်ကိုလဲ ထပ်လေ့ကျင့်ရပါမည်
Sample Letter (10)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (10) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Explanation Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (10) Explanation 🔸Duration = 12 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
➡ ဤ Lecture Video တွင် Discharge Letter ရေးနည်းကို လေ့လာရပါမည် Discharge Letter 🔸Duration = 17 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ်
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင် Discharge Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် တင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် 🔸 လက်ရေးနှင့် ရေးထားသော Letter များကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ပါသည် 🔸 သို့သော် လက်ရေးပီသမှုတော့ ရှိဖို့လိုပါသည်။ လက်ရေးနှင့်ရေးလျှင် တစ်ကြောင်းခြားလောက်ရေး ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည် ... Read more Letter (11)
Week5– Day3Summary
Congratulation! You have completed Day3Lessons. Summary of Day3Lessons ➡ Day3တွင်လေ့လာခဲ့သော သင်ခန်းစာများမှာ Discharge Letter Sample Letters (10) Letter Writing Exercise (11) ➡ Day3တွင် Discharge Letter ရေးနည်းကို လေ့လာခဲ့ပြီးသောကြောင့် Discharge Letter ရေးကျင့်ရပါမည် ➡ သင်ခန်းစာများကို လေ့လာပြီးပါက Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်